Wordpress Themes အလန်းကလေးတွေ — MYSTERY ZILLION
Wordpress Themes အလန်းကလေးတွေ
Wordpress Themes အလန်းကလေးတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ လန်းလဲလန်း ... ဖရီးလည်းရ။ အဲသလိုပေါ့လေ။
Sliding Door Themes
live demoကြည့်ချင်ရင် ဒီမှာကလစ်
ကျနော်လက်ရှိသုံးထားတာကို ကြည့်ချင်ရင် ဒီမှာကလစ်
slide image တွေကို ပြောင်းချင်ရင်တော့
1. 320x200 px, 96 resolution ရှိတဲ့ ရုပ်ပုံတွေကို /wp-content/themes/slidingdoor/imagemenu/images ဖိုလ်ဒါထဲ ပို့ထားပါ။ (ရုပ်ပုံတွေက .jpg extension ဖြစ်ရပါမယ်။ .jpg မှာမှ .JPG ဆိုရင် အလုပ်လုပ်မှာ မဟုတ်ပါ။)
2. /wp-content/themes/slidingdoor/imagemenu ဖိုလ်ဒါထဲက imageMenu.css ကိုဖွင့်ပါ။
3. url(images/abstract.jpg) အဲလို နေရာတွေမှာ ကိုယ်အသစ်တင်ထားတဲ့ ဖိုင်နာမည်တွေပြောင်းပေးပါ။ (ဥပမာ url(images/myphoto001.jpg) စသဖြင့်ပေါ့လေ။ အားလုံး ၇ နေရာ၊ ၇ ပုံအတွက် ပြောင်းပေးရပါမယ်။)
ဒါဆို ကိုယ်ပိုင်ပုံတွေနဲ့ ဖြစ်သွားပါပြီ။
နောက်ထပ် တခုက ပုံတွေကို လင့် လုပ်ပေးချင်ရင် လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
header.php ဖိုင်ကိုဖွင့်ပြီး အောက်က ကုဒ်တွေကိုရှာ။
<li class="bk1"><a href="/?cat=1">Category 1</a></li>
a href အနောက်က /?cat=1 ဆိုတာက အဲဒီပုံကို ကလစ်လုပ်ရင် category 1 ကိုသွားဖွင့်စေဖို့ပါ။
ကိုယ့်အနေနဲ့ အခြားတခုကို ပြောင်းဖွင့်စေချင်လည်း ရပါတယ်။ ဥပမာ MZ ကို ဖွင့်စေချင်တယ်ဆိုရင် ဒီလိုပြောင်းပါ။
<li class="bk1"><a href="http://www.mysteryzillion.org">MysteryZillion</a></li>;
ဒီလောက်ဆို အိုကေကြမယ်ထင်ပါရဲ့။ အားလုံး ကျန်းမာပြီး စော်ကြည်ကြပါစေဗျာ။ အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကတော့ ကျန်းမာပြီး ဘဲကြည်ကြပါစေပေါ့လေ။ ဟီးးးးးးးးးးးးး။
ခုလောလောဆယ်တော့ ဒီတခုဘဲဗျာ။ နောက်ထပ် ကြိုက်တာလေးတွေ တွေ့ရင် ထပ်ရှဲပါအုံးမယ်။
ဟုတ်ကဲ ့ပါဗျာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။အဲလိုပေးတဲ ့အတွက် နောက်လူတွေလဲ ရှိရင် ပေးကြဦးနော်။ ကျွန်တော်လဲ wordpress သုံးတယ်ဗျ themes ပိုင်းက လဲ အရေးပါတဲ ့နေရာမှာရှိတယ်။ ကျွန်တော်လဲ တွေ ့ရင် တင်ပေးပါ့မယ် ။